डेंगु संक्रमितका लागि मेवाको पात वरदान, शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि यी ५ खाना (खाने तरिकासहित) – Health Post Nepal
२०७६ साउन २४ गते १४:३८
वर्षातको मौसममा डेंगु तथा मलेरियाको खतरा बढ्ने गर्छ । नेपालको पूर्वी तराई वैशाख अन्तिमबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण फैलिनेक्रम अझै जारी छ । नियन्त्रणका अनेक उपाय आपनाउँदा पनि सफलता हात लाग्न सकेको छैन । हालसम्म डेंगु संक्रमितको संख्या ३ हजार कटिसकेको अवस्था छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण फैलिन थालेको छ । विशेषतः स्थानीयमा सचेतनाको कमी र रोगबारे ज्ञान भएका विषयमा पनि हेलचेक्य्राइँले डेंगु संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तोमा डेंगुका बिरामीका लागि अत्यन्त लाभदायक ५ आहारबारेको अत्यन्त उपयोगी सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डेंगु लामखुट्टेका कारण फैलिने रोग हो, जो कतिपय अवस्थामा प्राणघातक बन्ने गर्छ । डेंगु भाइरसको संक्रमणमा आएपछि व्यक्तिलाई ज्वरो आउँछ र शरीरमा प्लेटलेट्सको संख्या घट्न थाल्छ । यसैले डेंगुबाट बच्नका लागि सही डाइटको सेवन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । शरीरमा प्लेटलेट्सको संंख्या घट्नाले डेंगु संक्रमित बिरामीमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादै कम हुन्छ । यसका अलावा डेंगुले पाचन क्षमतालाई पनि कमजोर बनाइदिन्छ । तसर्थ, डेंगु संक्रमितले बेस्ट डाइट प्लानको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसकारण चिकित्सकहरू डेंगु संक्रमित बिरामीलाई यस्तो आहार सेवन गर्ने सल्लाह दिन्छन्, जसलाई पचाउन सजिलो होस् र जसको सेवनले शरीरमा प्लेटलेट्सको संख्या बढोस् । डेंगुका बिरामीको डाइट कस्तो हुनुपर्छ र कुन–कुन आहारको सेवनले शरीरमा प्लेटलेट्सको मात्रा बढ्छ त ?
मेवाको पात डेंगुका बिरामीका लागि वरदान मानिन्छ । शरीरमा तीव्र गतिमा घटिरहेको प्लेटलेट्सको संख्या बढाउन सबैभन्दा छिटो र असरदार उपचार मेवाको पातलाई मानिन्छ । डेंगुका बिरामीले मेवाको पातलाई पिसेर यसको रस पिउनुपर्छ । यसले शरीरमा सेतो रक्तकोषिकाको निर्माण हुन्छ, प्लेटलेट्स बढ्छ र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ ।
मेवाको पात कसरी फइदाजनक ?
मेवाको पातमा काइमोपापिन (Chymopapin) र पापेन (Papain)जस्ता जरुरी इन्जाइम हुन्छन् । विशेषज्ञका अनुसार यी तत्त्वले शरीरमा प्लेटलेट्सको संख्यालाई सामान्य बनाउँछन् । यसको सेवनले ब्लड क्लोटिङ समान्य रहन्छ, साथै लिभरले पनि ठिकसित काम गर्छ । यसप्रकार यसको सेवनले डेंगुका बिरामीलाई छिटो ठिक हुनमा मद्दत पुग्छ ।
कसरी र कति मात्रामा गर्ने मेवाको पातको सेवन ?
रेड लेडी नामको मेवाको पात अधिक प्रभावशाली हुन्छ । पूरा लाभका लागि जो न ज्यादा नयाँ न ज्यादा पुराना पातको प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रयोगका लागि सबैभन्दा पहिले पातलाई सफा पानीले धुनुपर्छ । त्यसपछि काठको ओखल वा सिलौटोमा विनापानी नुन वा चिनी मिलाएर पातलाई पिस्नुपर्छ । यसरी कुटिएको पातबाट जुस निकालेर दिनको दुईपटक पिउनुपर्छ । विशेषज्ञका अनुसार वयस्कले दिनको दुईपटक १० एमएलका दरले यो जुस पिउनुपर्ने हुन्छ । तर, ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भने दिनको दुईपटक २.५ एमएलका दरले मात्र दिन सकिने विशेषज्ञको भनाइ छ ।
डेंगु संक्रमित बिरामीलाई अमिला प्रजातिका फलफूल (साइट्रिक फ्रुट्स)को सेवन गर्ने सल्लाह दिने गरिन्छ । वास्तवमा अमिला फलफूलमा भिटामिन सीको मात्रा ज्यादा हुन्छ, जो रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउन जरुरी भिटामिन मानिन्छ । यसकारण डेंगुका बिरामीका लागि सुन्तलाको सेवन पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । सुन्तलाको जुस वा फल दुवै खान सकिन्छ । यद्यपि, जुसको तुलनामा फल नै बढी लाभदायक मानिन्छ, किनकि यसमा फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ ।
डेंगुको संक्रमणमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार सामान्य चिजहरूको पनि सेवन गर्न सकिन्छ । तर, डेंगु संक्रमितले खानामा बेसारको प्रयोग भने अवश्य गर्नुपर्छ । वास्तवमा बेसारमा कर्क्युमिन नामक तत्त्व हुन्छ, जसले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र कैयौँ गम्भीर रोगबाट शरीरलाई बचाउँछ । यसका अलावा बेसारमा एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिइन्फ्लेमेसन गुण हुन्छ । यसैले डेंगुका बिरामीले बेसारको सेवन अवश्य गर्नुपर्छ । डेंगु संक्रमितले चिकित्सकसित सल्लाह लिएर दैनिक सुत्नुअघि दूधमा बेसार मिलाएर पिउन पनि सक्छन् ।
४. पालुंगोको साग
पालुंगोको सागको सेवन पनि डेंगुका बिरामीका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । पालुंगो आइरन तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ । साथै, पालुंगोमा ओमेगा३ फ्याटी एसिडको मात्रा पनि राम्रै पाइन्छ, जसले बिरामीको प्रतिरक्षाप्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ । यसका अलावा पालुंगोले शरीरमा प्लेटलेट्स बढाउन पनि मद्दत गर्छ । पालुंगुको तरकारी, अन्य परिकार वा जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छले शरीरमा प्लेटलेट्स बढाउन पनि मद्दत गर्छ । पालुंगुको तरकारी, अन्य परिकार वा जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ ।
५. नरिवलको पानी
डेंगुका बिरामीलाई चिकित्सकहरू प्रायः नरिवलको पानी पिउने सल्लाह दिन्छन् । डेंगुको संक्रमण हुनाले बिरामीको शरीर जलवियोजन (डिहाइड्रेसन)को सिकार हुन्छ, अर्थात् बिरामीको शरीरमा पानीको कमी हुन्छ । नरिवलको पानीमा अनेक मिनरल्स र इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छन्, जसले शरीरलाई डिहाइड्रेसनबाट बचाउँछन् ।